‘लिग च्याम्पियन बने पनि खल्लो महसुस भएको छ’ :: Setopati
‘लिग च्याम्पियन बने पनि खल्लो महसुस भएको छ’
सीताराम कोइराला काठमाडौं, फागुन ५
बुधबार एपिएफ र विराटनगरको खेल हेर्न बैसाखी टेकेर एन्फा कम्प्लेक्स पुगेकी एपिएफकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी 'साम्बा'। तस्बिर : एन्फा
सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल एपिएफ क्लबले महिला राष्ट्रिय लिगमा बुधबार लगातार एघारौं खेलमा जित निकाल्यो।
एपिएफले अपराजित यात्रा कामय राख्ने क्रममा एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकालाई १-० गोलले पराजित गर्‍यो। एपिएफको जितमा अनिता केसीले ५५ मिनेटमा निर्णायक गोल गरिन्।
विराटनगरविरुद्ध मैदान उत्रनुअघि नै एपिएफ लिग च्याम्पियन बनेको थियो। दिनको पहिलो खेलमा उपाधि होडमा रहेको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई नेपाल पुलिस क्लबले १-१ गोलको बराबरीमा रोकेसँगै एपिएफ दुई खेलअघि नै च्याम्पिनय बनेको थियो।
अन्तिम खेलअघि शीर्ष स्थानको एपिएफले ३३ अंक जोड्दा दोस्रो स्थानको आर्मीको २६ अंक छ।
विराटनगरविरुद्धको खेलमा एपिएफले अघिल्ला खेल भन्दा कमजोर खेल देखाएको थियो। एपिएफले आफ्नो स्तरको खेल देखाउन नसकेको मुख्य प्रशिक्षक भगवती थापा स्वीकार गर्छिन्।
'आजको जित खासै सुखद रहेन। पहिलो चरणमा विराटनगरविरुद्ध ८ गोलले जितेका थियौं। आज १ गोलले मात्र जित हात पार्‍यौं। जितमा खुसी त छु, तर सन्तुष्ट छैन,' महिला लिगकी एक मात्र महिला प्रशिक्षक थापाले भनिन्।
खेलमा एपिएफले मुख्य स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी 'साम्बा' लाई 'मिस' गर्‍यो। सोमबार पुलिसविरुद्धको खेलमा साम्बा घाइते भएकी थिइन्। दायाँ घुँडामा चोट बोकेकी साम्बा अब लामो समय मैदान बाहिर रहनु पर्ने भएको छ। लिगका १० खेल खेल्दा साम्बाले ४३ गोल गरेकी थिइन्।
साम्बा बुधबार बैसाखी टेकेर एन्फा कम्प्लेक्समा खेल हेर्न पुगेकी थिइन्।
साम्बाको अनुपस्थितिमा टिमको रफ्तारमा ब्रेक लागेको थापा बताउँछिन्।
'हाम्रो स्कोर गर्ने खम्बा साम्बा नै हो। उ झट्ट टिमबाट निस्किदा हाम्रो लागि के गर्ने? कसो गर्ने? भन्ने योजना बनाउन कम समय भयो। यो परिस्थितिले हामीलाई आजको खेलमा तालमेल मिलाउन अप्ठ्यारो भएको हो,' उनले भनिन्,'आजको खेलमा साम्बाको अभाव खड्कियो। किनभने हाम्रो लागि मुख्य स्कोरिङ गर्ने साम्बाले नै हो। टिम वर्क पछि गोल गर्नका लागि साम्बाको जस्तो स्पिड र स्किल भएका खेलाडी देखिनन्।'
साम्बा घाइते भएका कारण एपिएफले च्याम्पियन बनेको खुसी खुलेर मनाएको छैन। प्रशिक्षक थापा लिग जित्नुको खुसी भन्दा ठूलो पीडा साम्बालाई गुमाउँदाको भएको बताउँछिन्।
'उपाधिमा हामी खुसी छु। तर खुसीमा दु:ख भयो। किनभने हामीले मुख्य खेलाडी गुमायौं। लिग विजेता भए पनि खल्लो खालको भयो। लिग जिते पनि खुसीयाली मनाउने खालको भएन।'
प्रशिक्षक थापा एपिएफको समग्र खेलमा भने सन्तुष्ट छिन्। तर फेरि थापा आफ्नो सन्तुष्टि मजाले व्यक्त गर्न सक्दिनन्।
'समग्रमा ११ खेल जित्यौं। कुनैमा धेरै गोल भयो होला कुनैमा थौरै। सन्तुष्टी नै छु। तर मुख्य खेलाडीहरु घाइते भए। हिराकुमारी भुजेल घाइते भइन्। कतिपयले चोट सहेर पनि खेले। ठूलो घाटा भनेको साम्बा गुमाउनु हो,' उनले भनिन्, 'घाइते हुँदा खेलाडीलाई व्यक्तिगत घाटा भयो। टिमका लागि अर्को घाटा भयो। अझ राष्ट्रिय टिमका खेलाडी भएकाले देशलाई पनि घाटा भयो।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७, ०८:२३:००